Somaliland: Fanaan lagu xiray Hargaysa
HARGAYSA, Somaliland- Maamulka Somaliland ayaa xabsiga dhigay Fannaanka Farxaan Xidig oo kamid ah suugaanlayda Somalida kaasi oo muddo ku noolaa Qurbaha, balse muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaanada Somaliland.
Xidig ayaa ku xiran xarunta danbi baarista magaalada Hargaysa, waxaana la filayaa in maxkamad la hor geeyo.
Fannaankan ayaa loo haysto arrimo ka dhan ah madax banaanida maamulka Somaliland isagoo lagu soo eedeeyay inay degmada Boorame ee gobolka Awdal ka abaabulayay qorshayaal wax u dhimaya jiritaanka maamulkaasi.
Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in loo xiray howlo la xiriira siyaasadda iyo qorshayaal oo ku doonayay inuu kaga mid noqdo golaha Barlamanka Somalia.
Majirto ilaa hadda cid ka hadashay xarigga fannaankaas oo lagu xayo xabsi ku yaalla magaalada Hargaysa.
​Jilaagii caanka ahaa "Boon Xirsi" oo geeriyooday
Somaliland 18.12.2016. 02:10
HARGAYSA, Somaliland- Waxaa caawa magaalada Hargaysa xarunta maamulka Somaliland ku naf-waayay Jilaagii Somaliyeed ee caanka ahaa Boon Xirsi, kaasoo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay halkaasi.
Eheleda Marxuumka, ayaa warbaahinta u xaqiijisay geerida ku timid ...
​Shay Mire Dacar oo Hargaysa ku geeriyooday
Somaliland 17.07.2016. 19:09